ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စပီကာကော်နာကို လာခဲ့ပါ”
We will meet on that day ...
I link your post to my FB ....
ပွဲကြီးပွဲကောင်း လွတ်ပြီဗျာ၊ စလုံးမှာ အဲဒီနေ့ မရှိဘူး ခရီးထွက်ရမှာဗျ....
Re-entry permit တနှစ်တခါ တိုးရင်း စင်္ကာပူအစိုးရ အငြိုအငြင်ခံရင်း တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြသူတွေပါ။ သူများတွေ ၅ နှစ်သက်တမ်းကို ချက်ချင်းပေးတိုင်း ကိုယ်တို့ကတော့ ၁ လ စောင့်ပြီး ၁ နှစ်သက်တမ်းပဲ ရရှာတယ်.
Wunna Soe said...
အားပေးပါတယ်။ စင်ကာပူက တာဝန်သိ နိုင်ငံသားများ ဘာကြောင့်ညာကြောင့် ဆင်ခြေများ မပေးပဲ၊ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တတပ်တအား လာပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ ကိုယ်တကယ်မြင်ချင်တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ အနာဂါတ်အတွက် ကိုယ်လုပ်ပြပေးနိုင်တာလေး၊ အင်အားစုပြပေးရုံလေးပါပဲ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ ပါဝင်အားပေးကြသူအများစု မထိခိုက်လေရအောင် စီစဉ်သူများက တာဝန်ယူကြပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံသားအများစုဟာ မဲပေးဖို့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို မယုံကြည်သော်လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ကို အသုံးချဖို့ ဆန္ဒရှိကြတဲ့ နိုင်ငံသားအများအပြားရှိကြပါတယ်။ အခုက မဲပေးလိုတဲ့ နိုင်ငံသားအများဆီက အခွန်ငွေတော့ ယူမယ်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုတော့ အားလုံးကို မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးချိုးရာ ရောက်နေတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချဖို့အတွက် ကိုယ်က အများထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ အင်အားပြပေးရုံလေးပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စကားတခုရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးခဲ့ရင် နောက် ၄နှစ်အတွင်း ဘာမျှ မြည်တွန်တောက်တည်း ကွန်ပလိန်းတက်မနေပါနဲ့တဲ့။ အခုက ကျနော်တို့ဟာ အဲလိုအခွင့်အရေးတောင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးချင်းမခံရတဲ့ သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် လေ့လာသူအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လာရောက် စုရုံးပြီး မိမိရဲ့ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှုနဲ့၊ နိုင်ငံ့အရေးအပေါ် အရေးစိုက်မှုတို့ကို တပ်အားသရွေ့ပြပေးကြပါစို့။
ဦးပေါနှင့် ရေးလိုက်ငါးလိုက် ကော်မန့်ရေးသူများ
ဟားဟား . . . ဒီမိုတွေ . . . . ဒီမိုတွေ . . ဒီမိုတွေ တကယ်ကို တုံးလွန်းတယ်။ အရမ်းကိုတုံးတယ်ကွာ။ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ဖို့ မြန်မာတွေကို စည်းရုံးနေရအောင် ဘယ်မြန်မာကမှ ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ မဲလဲ ထည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နအဖရွေးကောက်ပွဲကို အယုံအကြည်မရှိဘူး . .. စိတ်မ၀င်စားပါဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာတွေကို မဲမပေးဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းတော့ မင်းတို့ပဲ စောက်ရူး ဖြစ်တာကို လူသိတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။ မဲပေးမယ့် မြန်မာတွေကလဲ မလွဲသာ မရှောင်သာတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ စစ်သားတွေလောက်ပဲ…. ကြောက်ပြီး မဲပေးကြမှာပါ။ သူတို့ကို သွားပြီးစည်းရုံးလဲ အလကားပဲ။ ဟဲဟဲ . . စစ်သားမဟုတ် . . ၀န်ထမ်း မဟုတ်ပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး မဲပေးမှာက ကုလားတွေကွ။ ကုလားကတော့ ပလီဆရာတွေရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးကြမယ်ဆိုပဲ။ ဦးဏှောက်ရှိတဲ့သူဆိုရင် မြန်မာတွေကို ဦးတည်ပြီး စည်းရုံးရမှာလား… ငါတို့ အိမ်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေကို မဲမပေးဖို့ စည်းရုံးရမှာလားဆိုတာ သိပါတယ်။
စင်ကာပူမှ ဒီမိုများ၏ ဘွဲ့လက်မှတ်များကို ခွေးချေးကျုံးရာမှာ အသုံးပြုဖို့ အဆိုပြုနေတဲ့
p.s. ဒီမိုငတုံးများ၏ ရူးပေါပေါလုပ်နေတာကို စိတ်ကုန်နေရင် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်တွေ့ကျကျ ဆန့်ကျင်လိုပါက ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
...Lun Lunn.... အိုကေ.... တွေ့ကြမယ်လေ။
....ချစ်ကြည်အေး.... အေးဗျာ... ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီတပွဲကို လွတ်သွားပေမယ့် မချစ်ကြည်အေးဟာ ကျနော်တို့နဲ့ ခံစားမှုချင်း၊ အတွေးချင်း ထပ်တူထပ်မျှဆိုတာ မချစ်ကြည်အေး ရေးတဲ့ပို့စ်တွေ၊ ကွန်မင့်တွေကို ဖတ်ရကတည်းက ရိပ်စားမိပါတယ်ဗျိုး။
.... Anonymous.... ကျနော်တို့နဲ့ ဘဝတူပဲဗျိုး။း-) တွေ့ကြသေးတာပေါ့။
... Wunna Soe.... သံရုံးမှာ မဲပေးဖို့ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းတဲ့ ကြေညာချက်ကလည်း မြန်မာသံရုံးဝက်ဆိုက်ထဲမှာ လူမသိ၊ သူမသိ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ထွက်သွားသဗျာ။ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နောက်ဆုံး ထားပြီး မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဆိုတော့ စင်္ကာပူက မဲပေးချင်တဲ့လူတွေတောင် သိလိုက်ကြပုံ မရဘူး။ အင်း... အခုပုံအတိုင်းဆိုရင် နောက် ၄ နှစ်အတွင်းမှာလည်း မြည်တွန်တောက်တည်းစရာတွေ တလှေကြီးကို မြင်နေရတယ်ဗျိုး။း-)
...★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★... ကိုဇော်မျိုးရေ.... ဦးပေါလို့ မခေါ်ပါနဲ့လားဂျာ။ အိုစာ သွားသလို ခံစားရလို့ပါ။း-)
ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံ ကုလားများ
ကုလားရှေ့နေ သန်းတင်က “ပျှမ်းမျှအားဖြင့် မြို့နယ်ကြီးများတွင် လူဦးရေ၏ ၁၀% ခန့် ရှိနိုင်သဖြင့် မြို့နယ်အမတ်လောင်းတို့အကြား အရှုံးအနိုင်အတွက် မဲပေးနိုင်မည့် သူများဖြစ်ကြပါသည်”လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ၁၀%ဆိုတဲ့ ကုလားလူဦးရေဟာ မျက်စိမှတ်ထားလို့ မရပဲ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အရေးပါနေတယ်။ တကယ်လို့ ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့တွေက နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်နေတာကို မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရင်… နအဖဟာ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ရသွားမှာပါ။ တနည်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင်တွေကို ရွေေးကာက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးဘက်ကို လုပ်နိုင်ရင် နအဖကို ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အသင်းတွေကို တခြားမြန်မာတွေနည်းတူ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမိုဘက်တော်သား အမည်ခံထားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို မြန်မာပြည်ပြန်ပို့အောင် လှုပ်ရှားသင့်တယ်။ ဒီမိုမြန်မာတွေက ခင်ဗျားတို့ ကုလားတွေအပေါ် ဘယ်လောက် ကာကွယ်ပေးခဲ့လဲဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ အဲလို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဒီမိုမြန်မာတွေရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်ပြီး .. လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပေးပါ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ တော်လှန်ရေးအပေါ် သစ္စာဖေါက်မယ်ဆိုရင် . . . . ခင်ဗျားတို့တွေကို ဒီမိုမြန်မာတွေက ဘယ်လောက် အထိ နာကျည်းမလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်က အချက်အလက်နဲ့ ပြောပြတာနော်… ကလေး ကုလား ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
စစ်အစိုးရကို အမှန်တကယ် မုံန်းတီးသောဒီမိုများ
အခုအချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တစ်ပါတ်ကျော်ကျော်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ မြန်မာအများစုမှာ မဲမပေးလိုသူနှင့် မလွှဲသာ၍ အတင်းမဲပေးရမယ်ဆိုရင် ကြံ့ဖွတ်မဟုတ်သူတွေကိုသာ မဲပေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထား ကြပါတယ်။ နအဖဆီမှ အခွင့်ထူးခံစားနေသောသူများက. . . . ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးကြလိမ့်မည်။ ရွေးကောက်ပွဲက အရမ်းကို နီးကပ်နေပြီမို့ ဆန့်ကျင်ရေးလုပ် လှု့ဆော်နေခြင်းမှာ အရူးအပေါ လုပ်ရပ်သာဖြစ်မည်။
သို့သော် ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ထိခိုက်အောင် လုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတော့ရှိပါသည်။ နအဖနှင့် အပေးအယူလုပ်ထားသော ပလီဆရာများ၏ သားသမီးနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ဗီဇာပိတ်ပင်ရေး လှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဖိအားသည် ပလီဆရာများနှင့် နအဖ အကြားလုပ်ဆောင်မှုကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါသည်။
ကုလားများသည် နေ့စဉ် ပလီဆရာများနှင့် အဆက်အသွယ်လုပ်ကြသည့် ထုံးဆံရှိပါသည်။ မဲပေးဖို့ . . . . နာရီပိုင်းအလိုအထိ ပလီဆရာတွေက ကြံ့ဖွတ်ကို မဲမပေးနဲ့ဟု စေခိုင်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုလို အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်သောနည်းမှာ နအဖ ပေးသော အရိုးအရင်းကိုက်နေသာ ပလီဆရာများ၏ သားသမီးများနှင့် ဆွေမျိုးများကို ပြစ်မှတ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျုပ်တို့က ဆော်သြဖို့တောင် မလိုပါဘူး။ ဒီမိုသမားများကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စပါပဲ။ နအဖနဲ့ လက်တွဲတဲ့ မြန်မာတွေကို ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီး ကုလားကို လျစ်လျူရှုထားခြင်းမှာ ခွဲခြားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. ဘယ်လိုလဲ? တကယ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ထိခိုက်စေချင်လား?
No one wants to give away Arakan to Rohingyas, not only you. Only c..k suckers may give away their
mothers and sisters to aliens.
But you are acting likeapeasant and such acts will lead Burma into trouble. You should not attack religion, but their illegal immigration and extremist views. They can worshit what(del)ver they want, everyone has rights to worships even if someone wants
to worshipabundle of pubic hairs circulating somewhere in universe,
and you can name that shit anything. But as long as they
dont ask you, convert you to submit to that hair bundle, let them worship whatever they want.
You can also worshipadonut or
da nyin thee too.
Also do not attack Human rights. It isagood concept even though rogue illegal immigrants are abusing it. Stop acting likeapeasant.
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ကျောသား ရင်သား ခွဲခြားတာတွေ မလုပ်သင့်ဘူး။ မေးချင်တာက နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဘယ်တော့ စမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီစာရွက်မှာ ရှေနေကုလား သန်းတင်က ပလီတွေဆောက်ခွင့်နဲ့ အခွင့်ထူးတွေပေးရင် . . နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ ဗြောင်ကြီးကို စည်းရုံးထားတယ်။ ပလီဆောက်ခွင့်ရရင် ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံကြပါလို့ စည်းရုံး ပြောဆိုချက်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့လုံးဝကို မကိုက်ညီပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက. .. အိမ်ရှင်မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
တောင်ဥက္ကလာပ မှာလဲ ပလီဆောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့လို့ အခုဆိုရင် ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက ကူညီနေကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကြီးစိုးနိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံပါဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ပြောနေပြီ။ ခင်ဗျားတို့က ဦးခင်မောင်ဆွေလို တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့သူကိုကြတော့ . . . နအဖ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံတဲ့အတွက် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက အားကျိုးမာန်တက် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတာကို ဘာလို့ ပါးစပ်တွေ ပိတ်နေတာလဲ? ကုလားကိုကြောက်ပြီး .. . မြန်မာအချင်းချင်းပဲ ရန်ဖြစ်ရဲတဲ့ အိမ်ကျယ်စိတ်ဓါတ်ကို မြင်တွေ့နေရတာလား? ဒီမိုဘက်တော်သားပါလို့ ပြောနေတဲ့ ကုလားတွေကလည်း ကုလားအချင်းချင်းဆိုတော့ မသိဟန်ဆောင်နေပြီ။
ပြစ်မှုကျူးလွန်တာခြင်းအတူတူ မြန်မာတွေကို အရေးယူခဲ့တယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့. . . ဒါပေမယ့် ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားခြင်းတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။ ဒီမိုဘလော့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တွေလဲ . . နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားတွေကို ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချမှုကို ဘယ်တော့ စပြီး ဆောင်းပါးတွေ ရေးမလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါ။
I’ve postedanote in my facebook I used your link for reference, it is exposing of anonymous’ comment.
I do hope you will not have any objection on it.
Jmoe.... Hi Ko J, no objection at all. ;-)
Hi All, I’ve been told to be amended by Madam Paw, here is new link again! I did remember what Sayar Aung Thyn Said… ha ha ha :) http://www.facebook.com/#!/notes/john-moe/egalitarianism-is-nonexistence-under-pap/450213853449
ကနေဒါ မှာ ဒါးထိုးခံရတယ်ကြားလိုက်လို.
ကုလားဇော်မျိုး ကုလားဇော်မျိုး ကလစ်ဒါးနဲ့ထိုးခံချင်နေပြီ